Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း)
Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Intrazoline ကို အများအားဖြင့် ပြင်းထန်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သော ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ရောက်ခြင်းများ (အဆုတ၊် အရိုး၊ အဆစ်၊ အစာအိမ၊် သွေး၊ နှလုံးအဆို့ရှင၊် ဆီးလမ်းကြောင်းတို့ အပါအဝင်) တွင်သုံးပါသည်။ တုပ်ကွေး နှင့် အအေးမိခြင်းကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများကို မကုသနိုင်ပါ။
Intrazoline ကို အခြားနေရာများတွင်လဲသုံးနိုင်ပါသည်။
intrazoline ကိုဘယ်လို သောက်/ ထိုး သင့်ပါသလဲ။
Intrazoline ကို ကြွက်သားထဲ သို့ သွေးကြောထဲထိုးရပါသည်။
အိမ်တွင် မည်သို့ထိုးရမည်ကို သင်ထားနိုင်ပါသည်။
မည်သို့ထိုးရမည် နှင့် အသုံးပြုပြီးသား အပ၊် ဆေးထိုးပြွန၊် အကြောဆေးသွင်းသည့် ပစ္စည်းများကို မည်သို့ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရမည်တို့ကို သေချာစွာ မသိပါက ကိုယ်တိုင်မထိုးသင့်ပါ။
Intrazoline ကို မထိုးခင် အရည် တစ်မျိုး(ပျင်းအားပျော့စေသည့်အရည်)ဖြင့်ရော ရမည်။ အိမ်မှာထိုးမည်ဆို လျှင် သေချာစွာရောတတ်အောင်နှင့် ဆေးကိုသိမ်းဆည်းတတ်အောင် သင်ထားပါ။
ဆေးကို မသုံးခင် သေချာစွာ လှုပ်ပါ။
အရောင်ပြောင်းနေလျှင် နှင့် ဆေးရည်ထဲတွင်အမှုန်များ တွေ့လျှင်မသုံးပါနှင့်။
ဆေးထိုးအပ်များကို တခါသုံးများအသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုသော ဆေးထိုးအပ်များနှင့် ချွန်ထက်သော အရာများကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။ ပြန်အသုံးမပြုပါနှင့်။
မသိလျှင် သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။ ဆေးထိုးသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဗူးများကို ကလေးသူငယ်များနှင့် ဝေးသော နေရာတွင်ထားပါ။
ပိုးများအကုန် မသေသေးသော်လဲ လက္ခဏာများ သက်သာလာနိုင်ပါသည်။
ဆေးကိုရပ်လိုက် ကျော်လိုက်ပါက ဆေးယဉ်ပြီး နောင်ပိုင်းတွင် ကုသရပိုခက်ပါလိမ့်မည်။
intrazoline ကို ဘယ်လို သိုလှောင်သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
Intrazoline ကို အခန်းအပူချိန်မှာ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံး သိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပ ဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ intrazoline ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
intrazoline ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
intrazoline ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Intrazoline ကို ပျင်းအားပျော့စေသည့်အရည်နှင့် ရောပြီးလျှင် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထား၍ ၁၀ရက်အတွင်းသုံးပါ။
ဆေးရည်ကို အခန်းအပူချိန်တွင် ၂၄ နာရီအထိထားနိုင်ပါသည်။
Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Intrazoline သည် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို စစ်ဆေးသည့် အခါ ပုံမှန်မဟုတ်သော အဖြေများထွက်နိုင်ပါသည်။
သင့်အားကုသသော ဆရာဝန်အား intrazoline သုံးနေကြောင်းပြောပြထားပါ။
အောက်ပါတို့ရှိလျှင် intrazoline ကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
သင်သည် cephalosporin ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စု (Omnicef, Cefzil, Ceftin, Keflex နှင့် အခြားဆေးများ) နှင့်ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ဖြစ်ဖူးလျှင်
penicillin ဆေးအုပ်စုနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
Intrazoline သည် ဗိုက်ထဲရှိကလေးကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ဟု ယူဆပါသည်။
Intrazoline သည် နို့ရည်ထဲတွင်ပါလာပြီး နို့စို့ကလေးငယ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟ ုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မိန်းမကိုယ်ယားယံခြင်း သို့ အရည်များဆင်းခြင်း
အောက်ပါတို့ ခံစားရလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းပြပါ။
ဝမ်းသွားခြင်း ( အရည်သွားခြင်း သို့ သွေးပါခြင်း)
ပါးစပ်အတွင်းနှင့် နှုတ်ခမ်းတို့တွင် အဖြူကွက်များ သို့ အနာများထွက်ခြင်း
အသည်းမကောင်းခြင်း ( ဗိုက် အပေါ်ပိုင်းနာခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အသားနှင့်မျက်လုံးဝါခြင်း)
ပြင်းထန်သော အရေပြားဓါတ်မတည့်ခြင်း (ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ မျက်နှာနင့် လျှာများဖောင်းခြင်း၊ မျက်လုံးပူခြင်း၊ အရေပြားနာခြင်း၊ နောက်တွင် အနီရောင် သို့ ခရမ်းရောင် အဖုများထွက်လာခြင်း အထူးသဖြင့် မျက်နှာနှင့် ခန္တာကိုယ် အပေါ်ပိုင်း)
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အင်ပြင်များထွက်လာခြင်း၊ အသက်ရှုရခက်ခဲခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာနှင့် လည်ချောင်းများဖောင်းခြင်း) ဖြစ်ပါက အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Intrazoline ဟာ သင်အခ ုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက intrazoline နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Intrazoline က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
intrazoline ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေက ိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတေ ွဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြေင်းရောဂါ ( ဥပမာ အူမကြီးရောင်ခြင်း) ရှိလျှင်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Intrazoline (အင်ထရိုဇိုလင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 0.5 – 1g ကို ၆ – ၈နာရီခြား၍ ထိုးရန်
အပျော့စား Gram-Positive Coci ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 250 – 500mg ကို ၈နာရီခြား၍ ထိုးရန်
အပျော့စားမှ အလတ်စား သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 1 –2g ကို ၈နာရီခြား၍ ၄ မှ ၇ ရက်ထိ ထိုးရန်
သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 1g ကို ၁၂ နာရီခြား၍ ထိုးရန်
ခွဲစတ်ကုသရန ်ပြင်ဆင်ခြင်း ( ရောဂါပိုးများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း)
မခွဲစိတ်ခင် : သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး 1-2 g ကို မခွဲစိတ်မီ မိနစ် ၆၀ခန့်ကြိုထိုးရန် ( ခွဲစိတ်နေစဉ်တွင်လဲ ၂ – ၅နာရီ ကြာလျှင် ထပ်ထိုးနိုင်ပါသည်။)
ခွဲစိတ်ပြီး : သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 0.5 – 1 g ကို ၆ – ၈ နာရီခြားပြီး ၂၄နာရီထိုးရန်
နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်းများ၊ သားအိမ်ထုတ်ခြင်း၊ ပါးစပ် နှင့် လည်ချောင်းခွဲစိတ်ခြင်း၊ ဦးခေါင်းခွံဖွင့်ခြင်း၊ အဆစ် အစားထိုးခြင်း၊ ရင်ခေါင်းပိုင်းခွဲစတ်မှုများ၊ သွေးကြောပြုပြင်မှုများ၊ ခြေလက်ဖြတ်တောက်ခြင်းများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားသူများ၊ အန္တရာယ်များသော အစာရေမြို။ အစာအိမ်နှင့်အူသိမ်ဦးပိုင်းနှင့် သည်းခြွေပွန် ခွဲစိတ်မှုများ : သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 1-2g ထိုးရန်
အူမကြီး ခွဲစိတ်မှုများ : သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 1-2g ထိုးရန် နှင့် metronidazole အကြောဆေး 0.5 gထိုးရန်
အန္တရာယ်များသော ကလေးခွဲမွေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ဒုတိယ ၃လတွင် ပျက်ကျခြင်း : သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး 1 g ထိုးရန်
မျက်စိခွဲစိတ်ခြင်းများ : သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – 100g ကို မျက်ကြည်လွှာအောက်တွင် ထိုးရန်
နှလုံး၏ အတွင်းဆုံးအလွှာရောင်ခြင်း : သတ်မှတ်ထားသောဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေ 1g ကို မခွဲစိတ်ခင် မိနစ် ၃၀ – ၆၀ ကြိုထိုးရန်
အမေရိကန် နှလုံးအဖွဲ့ ၏ လမ်းညွှန်ချက် : နှလုံး၏ အတွင်းဆုံးအလွှာရောင်ခြင်း အတွက် ပိုးမဝင်အောင်ကာကွယ်ရန်ဆေးပေးခြင်းကို ပိုးဝင်ရောက်နိုင်ချေများသူများတွင်သာပြုလုပ်ပါသည်။
ရောင်နေသောက်မျက်လုံးကို ၁ – ၂ နာရီခြားပြီး ၁စက် ခတ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် gram negative ပိုးကိုနိုင်သော ပိုးသတ်ဆေး (ဥပမာ tobramycin) နှင့် ၁ နာရီခြား ၁လှည့်စီ ခတ်ပါ။
parenteral cefazolin အမှုန့် 500mg ကို ပိုးသတ်ထားသောရေနှင့် ရော၍ ဆေးရည် 10ml ပြုလုပ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းပါ။ ၇ရက်ကျော်လျှင် မသုံးသင့်တော့ပါ။
၁မိနစ် လျှင် CrCl 35-54ml : ဆေးပမာဏအားလုံးကို ၈နာရီကျော်အောင် အချိန်များခြား၍ပေးရန်
၁မိနစ် လျှင် CrCl 10-35ml : ၁၂နာရီ ခြား၍ပေးရန်
၁မိနစ် လျှင် CrCl ≤10 ml :၂၄ နာရီ ခြား၍ပေးရန်
ကလေးငယ်တွေမှာ intrazoline ကိုထိုးရမယ့်အချိုးအစားကဘယ်လောက်လဲ။
Gram-Positive Cocci ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
မွေးကင်းစ ကလေး (၂၈ ရက်အောက်)
၇ရက်အောက် : သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး ကို 40mg/kg/day ဖြင့် ၁၂နာရီခြား ထိုးရန်
၇ရက်အထက်, 2kg အောက် : သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး ကို 40mg/kg/day ဖြင့် ၁၂နာရီခြား ထိုးရန်
၇ရက်အထက်, 2kg အထက် : သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး ကို 60mg/kg/day ဖြင့် ၈နာရီခြား ထိုးရန်
သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး ကို 25-100 mg/kg/day ဖြင့် ၆-၈ နာရီခြား ထိုးရန်
၁ရက် 6g ထက်မကျော်ရ။
နှလုံး၏ အတွင်းဆုံးအလွှာရောင်ခြင်း တွင် ပိုးမဝင်အောင် ကာကွယ်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး ကို 50 mg/kg ဖြင့် မခွဲစိတ်ခင် မိနစ် ၃၀-၆၀ ကြို ထိုးရန်။
AHA ၏လမ်းညွှန်ချက် : နှလုံး၏ အတွင်းဆုံးအလွှာရောင်ခြင်း အတွက် ပိုးမဝင်အောင်ကာကွယ်ရန်ဆေးပေးခြင်းကို ပိုးဝင်ရောက်နိုင်ချေများသူများတွင်သာပြုလုပ်ပါသည်။
လူထုထဲတွင် ဖြစ်ပွားသော နမိုးနီးယား
၃လအထက်နှင့် ကလေးကြီးများ : သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏ – အကြောဆေး/အသားဆေး ကို 150mg/kg/day ဖြင့် ၈နာရီခြား ထိုးရန် (အလတ်စားနှင့် အပြင်းစားရောဂါပိုးဝင်ရောက်ခြင်းများ အထူးသဖြင့် methicillin ပေး၍ရသော S.Aureus ပိုးဝင်ခြင်း)
intrazoline ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ၊ ပမာဏများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Intrazoline ထိုးဆေး၊ cefazoline sodium 1g
ဆေးထိုးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) ဘာလုပ်ရမလဲ။
intrazoline ကိုထိုးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရ ရခြင်း ထိုးပါ။ အကယ်၍ နောက်တစ်ကြိမ် ထိုးရမည့်အချိန်နှင့် ကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသော အကြိမ်ကို မထိုးပါနှင့်တော့။ ပုံမှန် အကြိမ်များအတိုင်းသာ ဆက်ထိုးပါ။ နှစ်ကြိမ်စာ တစ်ခါထဲ မထိုးပါနှင့်။ တစ်နေ့ တစ်ခါထပ်ပို မထိုး ပါနှင့်။